Ciidamadan ayaa u adeegsaday burburinta xarunta miinooyin xoog badan oo burburiyay dhammaan qalabkii yaallay xarunta sida Tower-kii, Laba Dab-dhaliye, BTS, Link-yo iyo dhismihii xarunta oo gabi ahaanba burburay.
Burburintan ayaa waxay sababtay in dad danyar ah oo ka badan 4,000 in ay awoodi kari waayaan in ay iibsadaan cunto, biyo, dawo iyo adeegyada kale ee asaasiga ah ka dib markii burburintaas ay kala go’ ku keentay isgaarsiinta iyo EVC Plus. Arrimahaas ayaa waxay sababaan in ay barakacaan dadka danyarta ah ee ku nool goobaha fogfog.
Ciidamadan ayaa horay waxay dil iyo dhaawacba ugu gaysteen qaar ka mid ah shaqaalaha Hormuud Telecom waxayna burburiyeen xarumo badan.
Burburinta joogtada ah ee Ciidamada Kenya waxay liddi ku tahay qawaaniinta caalamiga ah, waxayna ka hor imaaneysaa dadaalada Qaramada Midoobay iyo calaamkuba ugu jiraan sidii loo heli lahaa xasilin ka dhacda Soomaaliya.
Waxaan ugu baaqaynaa Dowladda Soomaaliya, Qaramada Midoobay, AMISOM iyo AU in ay dadaal u galaan sidii loo joojin lahaa weerarada ay gaysanayaan ciidamada Kenya loona hor keeni lahaa caddaaladda. Sidoo kale, hay’adaha xuquuqda aadanaha iyo beesha caalamkaba waxaan rajaynaynaa in ay baaraan arrintan. Cadaaladana la hor keeno qof walba oo ku lug leh arrintan